SEENAA BOONSAA KUDHAAMA TOKKUMMAAN AS GEENYEE; SEENAA SUMMII TOKKUMMAATTI TAHU DHALOOTA BORUU HIN DHAALCHIFNU! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooSEENAA BOONSAA KUDHAAMA TOKKUMMAAN AS GEENYEE; SEENAA SUMMII TOKKUMMAATTI TAHU DHALOOTA BORUU HIN DHAALCHIFNU!
Qixxeessaa Lammii | Ebla 18, 2018 Sabni Oromoo kan gabroome fedhee ykn jaalatee osoo hin…